Ngaba unyana wam ofikisayo akanabahlobo | Oomama Namhlanje
Kutheni unyana wam ofikisayo engenabo abahlobo
UAlicia tomero | 07/06/2021 10:00 | Iingcebiso, Intsapho
Ukufikisa linqanaba elihle apho abantwana baqala ukwakha ukuzithemba kwabo. Lixesha apho uphuhliso lwabo olunomdla luqala ukuthatha intsingiselo kwaye kufuneka balawule uninzi lweemvakalelo. Bazali, sibek 'esweni ngokusondeleyo indlela abaziphethe ngayo kwaye Ngamanye amaxesha siyaqaphela ukuba unyana wethu ofikisayo akanabahlobo.
Sihlala sikholelwa ekubeni abafikisayo Kufuneka bahlale bejikelezwe ngabahlobo ubudala bakho. Baqhuba umsebenzi ophakamileyo wentlalontle kwaye nangona ubomi butshintshe kakhulu, zininzi iindlela zokuba nomsebenzi wabo awuphazanyiswa nokuba kukude kangakanani.
1 Kutheni unyana wam okwishumi elivisayo engenabo abahlobo?
2 Qonda kwaye uncede umntwana wakho ofikisayo
Kutheni unyana wam okwishumi elivisayo engenabo abahlobo?
Izizathu zokuba umntwana ofikisayo angabinabahlobo okanye kunzima kuye ukudibanisa ubudlelwane nabantu zinokwahluka kakhulu. Le meko inokuba njalo Yiba nomfanekiso-ngqondweni wabazali bengakhathali okanye benovalo kwaye kunokubangela ukuba le ndlela iphindaphindeke ngakumbi.
Inyaniso inokusenza sicinge ngeyona nto imbi kwaye kholelwa ukuba zininzi iingxaki ezinzulu kakhulu kunale nokuba unjani na unyana wethu. Ngale nto senze ukhetho lwazo zonke izinto ezinokubuyela umva ezinokukuchaphazela kwaye ukuba zibaluleke kangakanani kwimpilo yakho yengqondo.
Kukho abakwishumi elivisayo abathi Bakhululeka ngokugqithileyo kwaye abakuthandi ukuphuma endlwini. Zonke iintlobo zobutofotofo abazinikiweyo ukusukela besebancinci ekhaya zenza ukuba bajongane nemeko efanayo xa bekhula. Aba bafana abazenzi ngathi bazama nantoni na okanye nabani na, bahlala bezikhusela kakhulu. Ke ngoko Ukuvana nabanye abahlobo kuza kubaxabisa, kuba kunzima kanjani le meko.
Utshintsho lomzimba ekufuneka behambile kulo kwiminyaka yabo benza ulutsha oluninzi lufumane izakhiwo. Induna yolutsha, iinwele zakhe, utshintsho emzimbeni wakhe ... zezinye zezizathu zokuba akwazi ukwenza ukuba umntu okwishumi elivisayo azazi kwaye arhoxe ekudibaneni nabahlobo bakhe.
Ukuba neentloni ngomnye umqobo ukuze bangenwe kukungafuni ukuhlalisana. Iyafana ne Ukungeniswa, apho abantu abancinci begxila kwilizwe labo liphela ngaphakathi kwaye ngenxa yoko akukho mfuneko yokuba nabani na abelane ngobomi babo. Uninzi lwabantwana abangenayo bayabalekela kwilizwe elililolo kwimidlalo yevidiyo, apho zisenza ukuba babe nesithukuthezi ngakumbi.
Qonda kwaye uncede umntwana wakho ofikisayo
Ukuqonda okwenzekayo uloyiso lokuqala ekufuneka abazali balufumanise. Kuya kufuneka ufumanise ukuba ufuna isikhuthazo sokuzithemba kwaye kufuneka oku ziveze amandla akho. Bameme ukuba bazibonele ngokwabo iindlela ezahlukeneyo nezinto kubomi bakho bemihla ngemihla, Kuya kufuneka babe yinxalenye yesakhono sokwenza iimpazamo kwaye bafumanise ukuba yeyiphi imilinganiselo yokuziphatha abanokuthi bathathe inxaxheba ngayo nabahlobo babo.
Singakhuthaza imisebenzi yabo ngokubakhuthaza ukuba sebenzisana kwizinto zoluntu, kunye neeklasi zeqela, imidlalo yeqela ... ukuba nje ihambelana nezinto ozithandayo, uku ungaziva ukhululekile kwaye udityanisiwe.
Ukuba umntwana wakho okwishumi elivisayo uhambela phambili ekwazi ukunxulumana, uhlala uhleli inkqubela yabo kufuneka yomelezwe. Akulungele ukuthelekisa indlela oziphethe ngayo naleyo yabanye oogxa bakho okanye abahlobo. Kananjalo asenzi lucalucalulo ngendlela abazali ababephila ngayo kwintlalo yabo kunye nendlela esijongana ngayo neyona ndlela yokuziphatha yabo ingaqhelekanga kuthi. Ukuba siqinisekile kwaye Siyabakhuthaza ngenkqubela phambili yabo iya kuboniswa ekuhambeni kwexesha isimo sengqondo esihle ngakumbi kunye nabanye abahlobo bakhe.
Nangona kunjalo, ukuba sibona ukuba umntwana wethu ubeka nje izithintelo xa sizama ukumnceda okanye uziva ubuthathaka ngoncedo lwethu, kungafuneka yiya kwingcali ukuze bakwazi ukusinceda. Ngale ndlela, unokusebenza kwisizungu sakho kwaye ufumane inkxaso kwindlela ekufuneka siphendule ngayo kwingxaki enjalo. Ungakulibali oko into ebalulekileyo kukuba usebenze kuloyikoUkuxhalaba ekuhlaleni, ukungazithembi kunye nokuphuhlisa izakhono zakho zentlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Kutheni unyana wam ofikisayo engenabo abahlobo
Kutheni unyana wam ofikisayo endizonda
Ukwazi njani ukuba umntwana wam uhamba kakuhle